MEET THE MENACE: DARRAGH ENNIS သည် THE CHASE တွင်အသစ်စက်စက် CHASER ဖြစ်သည် - သတင်း
ပြိုင်ပွဲဝင်သူ The Chase ၏ Chaser အသစ် Darragh 'The Menace' Ennis ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
The Chase သည် Darragh The Menace Ennis ပုံစံဖြင့် chaser အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ဂျဲနီက The Vixen ရိုင်ယန်နောက်ကျော 2015 ခုနှစ်တွင်ပြပွဲဝင်ရောက်ပြီးနောက်သူသည်ယခုအချိန်အထိသူ rave ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်ရဲ့သူကနောက်ဆုံးပေါ်အသစ်ကထို့အပြင်ရဲ့, တွစ်တာပေါ်ရှိလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအသစ်ဖြစ်ဖို့သူ့ကိုကျောထောက်နောက်ခံအတူ။
The Chase တွင်ကုန်ပစ္စည်းအသစ် chaser ဖြစ်သော Darragh The Menace Ennis အကြောင်းသင်သိထားသင့်သည့်အချက်များအားလုံးဒီမှာကြည့်ရန်။
အဆိုပါ Chase အပေါ် chaser အသစ် Darragh Ennis, ပြပွဲအပေါ်ဟောင်းပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်ပါတယ်
အသက် ၄၀ အရွယ် Darragh Ennis သည်အောက်စ်ဖို့ဒ်တွင်နေထိုင်သောအိုင်းရစ်သိပ္ပံပညာရှင်နှင့်သုတေသီဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့ပြီးသူသည်အလွန်စွဲမှတ်သွားသောကြောင့်ထုတ်လုပ်သူများကသူ့ကိုဆွဲထုတ်။ အလုပ်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။
- Darragh Ennis (@bones_giles) ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀
သူသည်ပြိုင်ပွဲဝင်တ ဦး အနေဖြင့်သူ၏ငွေသားဆောက်သူအတွက်ပေါင် ၉၀၀၀ လောက်အထင်ကြီးခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်လုံးဝအသင်း၏ကစားဖော်များကအနုတ်ကမ်းလှမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအုပ်စုဆုဆုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအိမ်ကွင်းကိုပေါင် ၁၅၅၇ နဲ့ယူပြီး Paul Sinha ကသူ့ကိုပြသခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ခေါ်ခဲ့သည်။
တွစ်တာတွင်သူ၏အဖွဲ့သည်အနုတ်လက္ခဏာကမ်းလှမ်းမှုများပြုလုပ်နေသည့်အတွက်လုံးဝဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ #JusticeForDarragh သည်ခေတ်စားနေသည်။ ပရိသတ်များသည်သူအတွက်သူပြန်ရရှိသောငွေများကိုရှာဖွေရန် GoFundMe စာမျက်နှာတစ်ခုကိုတောင်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
သူက The Menace ဆိုတဲ့ The Chase အဖွဲ့နဲ့ပဲပူးပေါင်းခဲ့တယ်
Darragh သည်သူ၏ရာထူးကြီးသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည် တွစ်တာပေါ်မှာ ဟုငါ 6th chaser ဖြစ်ဖို့တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်#TheChase။ ငါယခုခဏအဘို့ဤအပေါ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေနှင့်ငါ့ဖြစ်စဉ်များလေမှစောင့်ဆိုင်းလို့မရပါဘူး။ ကောင်းပြီငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ရသူများ။
ဟုတ်လား! အဲ့တာကိုယူ @anne_hegerty , သင်၏ပုံမှန်အတိုင်းချွတ်ခေါက် !!! https://t.co/2kFfjoFXNQ
This Morning မှအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူကပြပွဲတွင်အလုပ်တစ်ခုကမ်းလှမ်းသောအခါထုတ်လုပ်သူများကနောက်ပြောင်နေသည်ဟုထင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူက“ မှတ်တမ်းတင်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါကဟာသလို့ထင်ခဲ့တဲ့ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဆီကဖုန်းခေါ်တယ်၊ ပြီးတော့အဲဒါကတကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ပဲ၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလာကြည့်ဖို့ပြောနေတာ။ ငါ၌အချိန်ကြာမြင့်စွာနေခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပြပွဲမှာသူတို့မယုံခင်အချိန်တော်တော်များများကစာရင်းစစ်တွေ၊ စမ်းသပ်မှုတွေ၊ လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။
သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးအသှငျအပွငျအောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်, ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ခုဘဏ်အတွက်£ 10000 နှင့်အတူသူ့ကိုဆန့်ကျင်နောက်ဆုံးအပြေးလိုက်တယ်။ သူတို့က ၁၆ ဂိုးကိုသွင်းထားပေမယ့် Darragh ကသူတို့ကို ၇ စက္ကန့်လောက်ပဲဖမ်းခဲ့တယ်။
Darragh Ennis သည် Oxford တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာတွင်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာရှိသည်
Darragh The Menace Ennis သည် The Chase ကို ၀ င်ရောက်စူးစမ်းသူအဖြစ်သာမက Oxford တက္ကသိုလ်မှပါရဂူဘွဲ့သုတေသီလည်းဖြစ်သည်။ အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏ ဦး နှောက်ကိုလေ့လာခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ Darragh သည်ကနေဒါရှိ Concordia တက္ကသိုလ်နှင့်အိုင်ယာလန်၏ Maynooth တက္ကသိုလ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
သူ့ website တွင် သူကပြောပါတယ်: ငါ Ilan ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းမန်နေဂျာလည်းပါရဂူသုတေသီဖြစ်၏, ငါ 2013 ခုနှစ်ကတည်းကဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာပါပြီ။
သူက The Menace မတိုင်ခင် The Chase အတွက်အမည်မဖော်ဘဲပယ်ချခဲ့သည်
Darragh သည်သူ၏ပထမဆုံးအမည်ပြောင်ဖြစ်သည့်ပါမောက္ခအားမူလကငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အောက်စ်ဖို့ဒ်၌သူ၏အလုပ်ကြောင့်သူ့ကိုပေးခဲ့သည်။ This Morning မှအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူက“ ငါအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါကမင်းတကယ်ရဖို့လိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါမောက္ခလို့ခေါ်ရင်လူတွေအရမ်းစိတ်ဆိုးကြလိမ့်မယ်။
ဒါနဲ့ငါမလိုချင်ဘူးလို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမသေမချာခင်ငါ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတာငါ့ကိုမပြောကြဘူး။ ငါစင်ပေါ်မှာ, ငါပထမ ဦး ဆုံးကြားရသောအခါသွားကြဖို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့သည်။
သူ၌အမှန်တကယ်ဂူဂဲလ်ပညာရှင်တွင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းရှိသည်ဆိုသောကွောင့် Menace သည်မှန်ကန်သောစမတ်ဖြစ်ရမည်
ဟုတ်တယ်၊ Darragh ဟာတကယ့်ကိုစမတ်ကျတယ်။ သူကတစ် ဦး ရှိတယ် Google Scholar တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သူကသူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်ဆောင်းပါးများ, စာအုပ်များနှင့်သုတေသနဂျာနယ်များအားလုံးစာရင်းပြုစု။ ယင်းတို့ထဲမှအချို့သည်ကပ်ပါးကောင်များ၊ ထင်းရှူးပင်များ (ဥပမာအားဖြင့်တွန့်ဆုတ်နေသော bug) နှင့်အခြားအင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုများပါဝင်သည်။
• ပြိုင်ပွဲဝင်ဟောင်းတစ် ဦး သည်အမှန်တကယ် The Chase ၌သွားလိုသည့်အရာကိုဖော်ပြခဲ့သည်
• ဤရွေ့ကား ITV ရဲ့ The Chase အပေါ်အစဉ်အဆက်အနိုင်ရရှိအကြီးမားဆုံးဖြစ်ကြသည်